“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल चैत्र २९ गते शुक्रबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला👇👇 - Cutesmswishes
मुख्य पृष्ठ /राशिफल/“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल चैत्र २९ गते शुक्रबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला👇👇
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । सच्चिदानन्दरुपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः ।पञ्चाङ्ग श्रीसूर्य उत्तरायण,वसन्तर्तुः,परिधावी नाम संवत्सर,शाके १९४१,सम्वत २०७५ साल चैत्र २९ गते शुक्रबार नेपाल सम्बत ११३९ चौलाथ्व,सन् २०१९ अप्रिल १२ तारिक शुक्लपक्ष सप्तमी तिथि विहान १० वजेर ४८ मिनेटसम्म,आद्र्रा नक्षत्र प्रात ७ वजेर ४३ मिनेटसम्म,अतिगण्डयोग,वणिजकरण,आनन्दादियोग पद्म,सूर्य मीन राशीमा,चन्द्रमा राती १२ वजेर ४७ मिनेटसम्म मिथुन उप्रान्त कर्कट राशीमा ।
मुहूर्त – शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११÷३९ वजेबाट मध्यान्ह १२÷३० वजेसम्म रहनेछ । सामान्य गुली काल मुहूर्तः–विहान ७÷२० वजेबाट ८÷५५ वजेसम्म रहनेछ । अशुभ राहुकाल मुहूर्तः–विहान १०÷३० वजेबाट मध्यान्ह १२÷५ वजेसम्म रहनेछ । अशुभ यमघण्टायोगः–अपरान्ह ३÷१५ वजेबाट ४÷५१ वजेसम्म रहनेछ । अशुभ दूरमुहूर्तः– विहान ८÷१६ वजेबाट ९÷७ वजेसम्म र मध्यान्ह १२÷३० वजेबाट अपरान्ह १÷२१ वजेसम्म रहनेछ ।
बार वेला – सूर्योदयबाट प्रातः ७÷२० वजेसम्म चर वेला,७÷२० वजेबाट ८÷५५ वजेसम्म लाभ वेला,८÷५५ वजेबाट १०÷३० वजेसम्म अमृत वेला,१०÷३० वजेबाट १२÷५ वजेसम्म काल वेला,१२÷५ वजेबाट १÷४० वजेसम्म शुभ वेला,१÷४० वजेबाट ३÷१५ वजेसम्म रोग वेला,३÷१५ वजेबाट ४÷५१ वजेसम्म उद्वेग वेला र ४÷५१ वजेबाट सूर्यास्तसम्म चर वेला रहनेछ ।
बार वेला – सूर्यास्तबाट ७÷५१ वजेसम्म रोग वेला,७÷५१ वजेबाट ९÷१६ वजेसम्म काल वेला,९÷१६ वजेबाट १०÷४१ वजेसम्म लाभ वेला,१०÷४१ वजेबाट १२÷६ वजेसम्म उद्वेग वेला,१२÷६ वजेबाट १÷३१ वजेसम्म शुभ वेला,१÷३१ वजेबाट २÷५६ वजेसम्म अमृत वेला,२÷५६ वजेबाट ४÷२० वजेसम्म चर र ४÷२० वजेबाट सूर्योदयसम्म रोग वेला रहनेछ । शुभाशुभ“जीवानां जगताम् चैव सर्जक पालक प्रभु । वरद सुखदो नित्यम् सर्वान् रक्षतु सर्वदा । ॐशान्ति ॐशान्ति ॐशान्ति”।
मेषः– ग्रह,गोचर ठीकै देखिन्छ । समयको सदुपयोग गर्नु होला । समयमा गरेका अधिकाँश काम सफल हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ । साथि भाई इष्टमित्रबाट सहयोग मिल्नेछ ।
वृषः– अरुको कुरा सुनेर काम गरेमा दुःख पाईनेछ,डुविनेछ । आफ्नै प्रयासमा काम बन्ने छन् । संचित धनलाई चलाउने काम नगर्नु होला । नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा सतर्क रहनु होला । कार्य लगनशिलता विस्तारै बढ्नेछ ।
मिथुनः– दुविधामा नपरि काम गर्नु होला । निणर्य क्षमता कमजोर हुदा अरुले फाईदा उठाउने छन् । अर्थ व्यवस्थामा सुधार आउनेछ । आफन्तबाट सामान्य सहयोग मिल्नेछ । आफुमा भएको उर्जाको सदुपयोग गर्नु होला ।
कर्कटः– व्यय विचार बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउन सक्छ । अनावस्यक काममा समय र धन लगानी हुने देखिन्छ । विवाद पर्न सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । धैर्यता नगुमाउनु होला ।
सिंहः– व्यापार,व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ बचाएर राख्ने प्रयत्न गर्नु होला । नोकरी तथा राजनीतिमा केहि सहज महशुस हुनेछ । काम गरेर दाम कमाउने अवसर मिल्नेछ । विवादित कुराको टुङ्गो लाग्नेछ ।
कन्याः– अधुरा रहेका कामले थोरै गति लिनेछ । थोरै प्रयत्न गरेमा नयाँ काम हात पार्न सकिनेछ । मनबाट नै सहयोग गर्ने कोहि हुने छैन । आर्थिक क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिने छन् । इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ ।
तुलाः– फलदायी यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । अरुको काममा समय दिदा आफ्ना काम धेरै अधुरा रहन सक्छन् । व्यापार व्यवसायमा सामान्य सुधार आउनेछ । धर्म प्रति रुची जाग्नेछ ।
वृश्चिकः– भाग्यले साथ दिने देखिदैन । अनावस्यक काम बढि हुनसक्छन । बन्न लागेका काम विग्रिने छन् । व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दि कायम रहनेछ । स्वास्थ्य समस्याले सताउनेछ ।
धनुः– रजो गुण बढ्नेछ । दुविधा मुक्त भएर अगाडि बढ्नु होला । लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् । आयत निर्यात व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । इष्टमित्र साथी भाईबाट सहयोग मिल्नेछ ।
मकरः– व्यापार व्यवसायमा सुधार आउनेछ । विरोधीको सक्रियता बढ्ने हुदा काम गर्दा सजग रहनु होला । मनमा एक प्रकारको चिन्ता रहि रहनेछ । परिश्रमको फल राम्रै मिल्नेछ । ऋण लगानी नगर्नु होला ।
कुम्भः– समयमा सामान्य सुधार आउनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ । पारिवारिक सुखमा थोरै वृद्धि हुनेछ । पठन पाठनमा सामान्य प्रगति हुनेछ । यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
मिनः– अस्थिरता अनिष्ठ निम्त्याउनेछ सतर्क रहनुहोला । घरयासी समस्याले छोड्ने छैन । व्यवस्थापन मिलाउन गाह्रो हुनेछ । अनावस्यक कुरामा अल्झिने सम्भावना बढि छ । व्यापार व्यवसायमा धेरै प्रगति हुने देखिन्न ।